कोरोना लाग्यो ? यी खानेकुरा खानुस्, रोगसँग लड्ने शक्ति मिल्छ चुराेटबिँडी, जाँडरक्सी नखाने, नियमित ब्यायाम गर्ने, ध्यान, योग गर्ने, किताब पढ्ने, समयमा सुत्ने, समयमै उठ्ने, सकारात्मक सोच्ने, तनाव नलिँदा शरीर स्वस्थ रहन्छ Share
कोरोना कहरमा घर फर्किएकाहरू भन्छन्- शहर त पैसा हुन्जेल सम्मका लागि मात्रै रहेछ Share
कसरी पाउने कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्ति ? (भिडियोसहित) Share
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै कोरोना मापदण्ड पालना हुँदैन, ज्वरो परीक्षण नगरी यात्रुको आवतजावत Share
रामकाजीको संघर्ष, समयले सिकाएको कर्म (भिडियोसहित) Share
घरमा ‘मनी प्लान्ट’ लगाउँदा यस्ता फाइदा लहरे वनस्पति मनी प्लान्ट हाम्रो घरभित्रै रोप्न मिल्ने प्रजातिको विरुवा हो । यसलाई पानीमा मात्रै वा माटोमा पनि रोप्न सकिन्छ Share
दालचिनी एक फाइदा अनेक दालचिनीले खानाको स्वाद र बासना बढाउने मात्रै नभई हाम्रो शरीरमा देखा पर्ने विभिन्न समस्याबाट छुटकारा दिलाउन समेत मद्दत गर्दछ Share
थ्याङ्क्स आमा ! दिदीको घर सुनसरी । आमाले बहिनीको उद्धार गर्न भनेपछि दिदी पुग्छिन् वीरगञ्ज । आमाले दिदीलाई भन्नुभएछ, लगत्तै दिदीले फोन गरिन् । दिदीले घरमा बहिनीलाई भेटिनन् । भेटून् पनि कसरी ? श्रीमानले मार्ने योजनासहित शोभालाई रक्सौलमा लगेर राखेका थिए Share
कसुरी मेथीकाे फाइदै फाइदा कसुरी मेथीको पातदेखि लिएर बिउलाई समेत प्रयोग गरिन्छ । यसको प्रयोग खानाको बास्ना बढाउनका लागि गरिन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छ । आयुर्वेदका अनुसार कसुरी मेथी शरीरको विभिन्न समस्याको सामाधानका लागि उपयोगी मानिन्छ Share
घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् बढ्दो व्यस्तताका बाबजुद केही समय निकालेर साथीभाइ, परिवारसँग घुम्न जानुको मज्जा बेग्लै हुन्छ । घुम्न जाँदा मज्जा त हुन्छ नै, केही सावधानी अपनाउन सकिएन भने ठूलो समस्यामा पनि पर्न सकिन्छ Share
अनुहारमा चमक चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु फेस प्याक महिलामा छाला सम्बन्धी धेरै समस्या देखिने गर्छ । तर, यी समस्याहरुलाई घरमा नै समाधान पनि गर्न सकिन्छ । हाम्रो घरमै रहेका केही सामाग्रीहरुको प्रयोगले अनुसारमा चमक मात्रै नभइ छालाको स्याहार गर्न सकिन्छ Share
मृत्युसँग डाक्टर पनि डराउँछन् एउटा डाक्टरले हजारौँ मृत्युलाई देखेको हुन्छ । कतिलाई लाग्छ, कति कठोर डाक्टर ! तर, डाक्टरलाई पनि मृत्युदेखि डर लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘मृत्युको मुखमा पुगेका बिरामीबाट धेरै सिक्न सकिन्छ’, उनी भन्छन् Share
कसरी गर्ने रिस नियन्त्रण ? हामीले आफ्नो रिस नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । रिसको झोंकमा गरिने हरेक कामले हामीलाई झनै धेरै समस्या निम्त्याउँछ Share
यौनजीवनका लागि कति खतरनाक ‘लिभिङ इन टुगेदर’ ? पछिल्लो एक दशकमा युवाहरूबीच ‘लिभ इन रिलेसनसिप’ धेरै लोकप्रिय छ Share
चिसोमा स्वस्थ रहन के गर्ने ? हाम्रा बुढापाकाले भन्ने गरेको एउटा उखानै छ नि, तन्नेरी जति बाघलाई, बुढापाका माघलाई । माघ महिना पनि सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यो माघे जाडोमा स्वस्थ रहन यस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ Share
‘सेक्स जीवन’ ध्वस्त पारिदिन्छ पुरुषको यो रोगले मैले पनि त्यही गरे, जो अपरिपक्व उमेरका मानिसहरूले गर्छन् । मेले अनलाइनमा आफ्ना लक्षणको जाँच गर्न सुरु गरें । अनुसन्धानपछि मलाई थाहा हुँदै गयो कि यो लक्षण यस्तो बिरामीतिर लक्षित थियो, जो हरेक १० मध्ये एक पुरुषमा हुन्छ Share
कसरी जोगाउने खानेकुरा ? हाम्रो भान्सामा दैनिक धेरै खानेकुरा खेर गइरहेको हुन्छ । सागसब्जी, फलफूल, ब्रेड, रोटी कुहिएर खेर जान्छ । यस्ता, खानेकुरालाई फाल्नुभन्दा यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ Share
श्रीमतीको १६ परपुरुषसँग याैन सम्बन्ध, श्रीमानले लिए यसरी बदला जिम्बाब्बेका एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीको अनैतिक चरित्रको यसरी पर्दाफास गरेका छन्, जसको चर्चा अहिले व्यापक रूपमा भइरहेको छ । Share
हाँस्न पैसा पर्दैन नि ! मुस्कान त्यतिखेर मात्रै पूर्ण हुन्छ, जब त्यो दिलबाट सुरु भएर ओठ हुँदै आँखाबाट झल्किएर अरु कसैको अनुहारमा ज्योति बनेर चम्किन्छ Share
यी खानेकुराले गर्छ तनाव कम मानिसको जीवनमा धेरै उतारचढाव आउँछन् । यस्तै, तनाव बढ्दा वैचारिक विचलनसहित विभिन्न रोग लाग्नेसमेत सम्भावना हुन्छ । यदि तपाईं तनावमा हुनुहुन्छ भने यस्ता खानेकुरा खानुस्, जसले तपाईंलाई केही मात्रामा भए पनि तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ Share
तरूल खानुका फाइदै फाइदा माघ महिना नजिकिएसँगै बजारमा तरुलको माग बढेको हो । तरकारी बजारदेखि ठेलागाढामा राखेर तरुल बेच्नेहरू देख्न सकिन्छ । तरुललाई तरकारीको रूपमा र उसिनेर खाने गरिन्छ Share
पर्फ्युमको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! हामी पर्फ्युमको प्रयोग नाडी, कान, गलाजस्ता शरीरका अंगमा गर्छौं । तर, शरीरका कतिपय अंगहरू निकै संवेदशील हुन्छन् भने पर्फ्युम हुन्छ केमिकलयुक्त । त्यसैले शरीरका यी भागमा पर्फ्युम प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हाे Share
एक हप्तामै गोरो बनाउने घरेलु उपाय हाम्रो घरमा सजिलै पाइने सामग्रीहरूको प्रयोगले तपाईंलाई गोरो बन्न सहयोग गर्छ । यदि काँचो दूधमा बेसार मिलाएर अनुहारमा लगाउने हाे भने केही दिनमै तपाईंको छालाको रङमा परिवर्तन ल्याउँछ Share
सफल बन्नु छ ? छोड्नुहोस् यस्ता बहाना बहाना बनाउनेहरू गुनासो गर्नमा ब्यस्त हुन्छन् भने अवसर हेर्नेहरू आफ्नो सपनाको सिँढी चढ्नमा ब्यस्त हुन्छन् । त्यसकारण हामीले यस्ता बहानालाई जति छिटो छोड्न सक्यो, त्यत्ति नै छिटो सफल हुन सकिन्छ । Share